Fariin Ku Socota Saxaafada Iyo Shacabka Somaliland W/Q: Cali khadar Muse
Tuesday August, 14 2018 - 14:38:26
Thursday November 23, 2017 - 09:56:47 in by salman abdi
Doorashadii 13/11/2017 ka dhacday Somaliland codayntii waxay ku dhamaatay si nabad galyo ah,
oo caalamku aad inoogu amaanay najiidadiina waynu sugaynaa oo waxaynu rajaynaynaa inay guul inoogu dhamaato haddii Eebe idmo.
Runtii waxaa iska jirta in marka la tartamo xusbiyadu ay guul iyo guul daro intaba u badheedheen saddexda Musharaxna waynu ogayn inuu mid kaliyi ku guulaysan doono oo ayna suura gal ahayn in sadexduba mar madaxwayne noqdaan.
Hadaba shacbigii reer Somaliland ee sida wanaagsan uga soo gudbay olalihii doorashada ee mudada badan socday ee 13/11/17 codeeyay ee mid walba codkiisii ugu riday xisbigii uu taageersnaa runtii waxay mudanyihiin amaan iyo in la karaameeyo waanay mahadsan yihiin guul ayayna soo hooyeen oo indhidhii caalamka ayay soo jiiteen.
Maanta ma gayaan in la xajiimeeyo, codkoodii la musuqo ama cadaalad daro lagula kaco iyo in waxayna mudnayn lagu sameeyo oo been iyo waxaan jirin loo sheego oo la kiciyo.
Shacbiga waxaan leeyahay xisbiyada siyaasadu yaanay idin kala qaybin waxay xaq idiinku leeyihiin cod, codkiina waad siiseen midwaliba waa kursi doon ee aragti fog kama laha dalka waanad ogayndeen oo idinka maalin walba u soo baxaayey, maantana kii helaa waa kii kale. Mid reernimo wax idiinku qabanayaa ma jiro, maaha inay marna idin yidhaahdaan waa dimuqraadiyad kolna waa reer galool iyo reer qansax ee yayna idin wareerin. Nabadgalyada iyo amaanku waa wax idiin saamaxay inaad doorasho maanta ku naalootaan, qayrkiiin ma haysto nabad uu ku seexdo. Amaanka ilaashada oo walaalo ahaada oo faan iyo xumaan iyo xadgudub haysku kaashanina ee isku kaashada Alle kacabsi iyo inaad Saamaha fashaan idinkoo mid ah.
Saxaafada Somaliland waxaa aad uga digaya inay wararka beenta ah joojiyaan ee ay habeen iyo maalin faafinayaan oo wararka ay faafinayaan aad iskaga hubsadaan. Yaan shacbiga Somaliland iyo muwaadiniinta sharaftooda meel lagaga dhicin oon layska hor gayn. Wararka beenta iyo kutidhi-kuteenta ah een sal iyo raad toona lahayn ha joojiyaan. Hadal aan la hubsan oo aad bulshada ku faafiso iyo najiito been ah ayaa waxay keeni kartaa in dhibaato ka dhalato ama rubshado abuurto oo nabadgaliyadu khatar gasho debmigaas oo dhana waxaa leh qofka/shirkada baahinaysa hadalka aan la hubsan. Qoraal aad qorto ama kalmad been ah ama aan la hubsan ayaa amaanka wax u dhimikarta ama bulsho isjecel kala dili karta ee wararka aad faafinaysaan aad iskaga hubsata.
Rasuulku S.C.W. wuxuu yidhi: qofka inuu beenaale yahay waxaa ugu filan isagoo wuxuu maqlaba sheega. Soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa beenaale iyo ma hubsadaa walaalo ah.
Musharaxiinta codka laga helo waxaa la gudboon inay aqbalaan najiitada oo ka ku soo baxa u hambalyeeyaan geesinamadu sidaas ayay ku jirtaa iyo muwaadinimadu intuba. Doorasho cabasho lagama waayo laakiin dalka iyo nabad galyada aad ha loo ilaaliyo.
Saxaafada waxaan leeyahay Malaa’ig ayaa idin ilaalinaysa oo camalkiina qoraysa markaas wax wanaagsan ku hadla, oo qora wararka aad faafinaysaana aad iskaga hubsada oo wixii aad maqashaanba ha sheegina ee wanaaga ka shaqeeya oo wixii bulshada isku soo jiidaaya ee horumarka dalka ah ku dadaala.
Hargeisa:-Gudoomiye Faysal Cali Waraabe Oo Dalka Ku Soo laabta Kana Hadlay Casuumad Uu Fidiyay Qalbi Dhagax.